Maxaad Ma rabtaa in aad kaabta Your Nokia Phone?
Waxaa tahay xaaladaha qaar ka mid ah meesha aad rabto in aad telefoon gurmad Nokia. Akhri oo ku saabsan xaaladaha soo socda. Waxaa laga yaabaa in kaliya tiina oo kale ah.
* Ma doonaysaa inay ku deeqaan, diro ama la iibsado telefoonka Nokia qof kale, laakiin waxaad u baahan tahay xogta ku yaal.
* kaabta telefoonka Nokia hor jeestay in si Verizon, qaran ama kuwa kale in ay is dhaafsadaan wax.
* Your phone cusub waa si, si aad qorsheyneyso in gurmad aad telefoon Nokia ee xogta ka dib soo celinta.
* Ma kaabta si joogto ah si aad telefoonka Nokia jawi nabdoon.
* Waxaa jira qaar ka mid ah sababo kale taasoo keentay in aad gurmad ah ee aad telefoonka Nokia.
Sida loo kaabta Your Nokia Phone
Waxaa jira qaar ka mid ah tahay Nokia gurmad software si ay adiga kuugu gurmad ah ee aad telefoonka Nokia. In ay qayb ka socda, waxaan ku qor labada caan ah. Akhri si aad u hesho mid ka mid ah in aad rabto.
Xalka 1. kaabta Nokia (Symbian) phone in PC ee 1 click la MobileTrans
Xalka 2. kaabta Nokia la Suite Nokia PC
Kaabta Nokia in PC, fudud oo degdeg badan
Kaabta aad Nokia, phone Android oo iDevice una soo celiso telefoon kasta oo ay taageerayaan in 1 click .
Xiriirada kaabta iyo fariimaha qoraalka ah ee aad taleefan Nokia in PC xawaare oo degdeg ah.
Music kaabta, video iyo sawiro ka Nokia in PC si fudud.
Soo Celinta telefoonka aad Android, iDevice la Nokia gurmad faylka la 1 click.
Content Transfer ka Nokia in Android phone iyo iDevice effortlessly.
Taageerada Nokia telefoonada badan oo ay maamulaan Symbian 40/60 / ^ 3, Windows 8 / 8.1, qalabka Android oo iDevices. More halkan >>
Sida loo Xiriirada kaabta, SMS, Music, Video iyo Xiriirada ka Nokia
1. Waxa aad u baahan: A phone Nokia, cable USB ah, PC Windows iyo Wondershare MobileTrans ah. 2. Phone in hab Transfer Phone : Haddii sababta aad gurmad phone Nokia waa in la soo celiyo si aad telefoon cusub oo labadooduba way aad qabto in aad gacanta, waxaad si toos ah u isticmaali kartaa telefoonka ah in hab Phone si ay u kala iibsiga.
Tallaabada 1. Ku rakib oo baxsad Wondershare MobileTrans
Si aad ula bilowdo, Orod barnaamijka kombiyuutarka dib markii la rakibey. Si aad u samayso gurmad Nokia ah, waa in aad doorato kaabta iyo Soo Celinta hab oo guji kaabta .
Tallaabada 2. kaabta Nokia Phone in PC
Hel telefoonka Nokia ku shaqeeya iyo isticmaali cable USB ah in ay ku xidhmaan kombiyuutarka. Marka si guul ah loo aqoonsan yahay, telefoonka Nokia la soo bandhigi doonaa bidixda. Content ayaa aad awoodo gurmad yihiin saxday dhexe. Hubi content oo guji Start Copy si ay u bilaabaan gurmad Nokia ah.
Haddii yoour phone Nokia waddaa Windows 8 / 8.1 nidaamka, Mobiletrans dib karaa ilaa Photos, Music Videos iyo in kombuutarka. Wixii Xiriirada, inaad dib kartaa in OneDrive. Mobiletrans taageeri kartaa in la soo celiyo xiriir ka OneDrive qalabka kale, sida Android, iPhone, iwm
Tallaabada 3. Isticmaal kaabta ah File Nokia soo celinta Your Device Android, iDevice ama Nokia Phone
Sida aan kor ku soo sheegnay, waxaad soo celin karaa gurmad Nokia faylka marka aad hesho qalab cusub. In uu furmo suuqa hoose, guji Soo Celinta in ay galaan bogga soo celiyo. Si PC Connect qalab doonayo aad la cable USB ah. Marka qalab cusub u muuqataa on xaq, tagaan dhanka bidix iyo sax gurmad Nokia ah. U hubso in content aad rabto in la soo celiyo. Markaas, riix Start Copy laga bilaabi karo habka soo celiyaa.
Sida loo Demi Symbian in Android?
Sidee si ay u gudbiyaan Content ka Nokia in Phone ee Android?
Sida loo dhaqaaq Nokia Files in Samsung?
Sida loo Copy Faylal ay ka Nokia si iPhone?
Sidee si ay u gudbiyaan Content ka iPod in iPad?
Sida loo Copy Music ka iPod in HTC?
Sida loo dhaqaaq Faylal ay ka Nokia in Sony?
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Motorola si iPhone?
Raadinta hab xor ah u gurmad content ka Nokia in PC? Waxaad isku dayi kartaa Nokia PC Suite. Waxay kaa caawinaysaa in gurmad Nokia xiriirada, jadwalka taariikhda, fariimaha qoraalka ah, bookmark, qoraalo, goobaha iyo ka badan si uu PC.
Faa'iido: Lacag la'aan Qasaarooyinka: awoodin inay isticmaalaan faylka gurmad si loo soo celiyo si aad qalab Android ama iDevice. Music, video iyo Sawirro aan la soo si toos ah u taageeray karo.
Tallaabada 1. Download Nokia PC Suite kombiyuutarka iyo waxa maamula. Connect telefoonka Nokia in computer via Bluetooth, cable USB ama infrared.
Tallaabada 2. In ay suuqa kala Nokia PC Suite, guji icon gurmad in ay galaan Nokia suuqa kala Content Copier ah.
Tallaabada 3. Dooro gurmad icon iyo sax content aad la doonayo. Markaas, riix icon xaq-fallaadh u bilowdo hawsha gurmad.
Baro wax badan oo ku saabsan Nokia PC Suite >>
Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka PC in Nexus 5
> Resource > Transfer > Sida loo kaabta Nokia Xiriirada, SMS, Music, Video, Photos iyo More in 1 Click